China casserole na gburugburu udi SKU NO.271-272-273-274-275-276 Manufacturers na Suppliers | SJZ JINXUAN
Ahụkebe Kitchen-to-Isiokwu egosipụta The iko casserole ka o di mfe esi nri n'ihu oge na ụlọ ahịa na friji ma ọ bụ friza mgbe e mesịrị. Best niile, casserole ikwu n'ụzọ mara mma si oven ọ bụla table-esetịpụrụ keugwu serving, na rifọrọ erifọ nwere ike ịga nri azụ na ngwa nju oyi na njedebe nke abalị. Biko Mata: adịghị akpali iko casserole kpọmkwem site friza na oven. Ka nri igbaze tupu nri ma ọ bụ reheating na oven. Jide n'aka na-eji a potholder mgbe ejizi ...
The iko casserole ka o di mfe esi nri n'ihu oge na ụlọ ahịa na friji ma ọ bụ friza mgbe e mesịrị. Best niile, casserole ikwu n'ụzọ mara mma si oven ọ bụla table-esetịpụrụ keugwu serving, na rifọrọ erifọ nwere ike ịga nri azụ na ngwa nju oyi na njedebe nke abalị.
Biko Mata: adịghị akpali iko casserole kpọmkwem site friza na oven. Ka nri igbaze tupu nri ma ọ bụ reheating na oven. Jide n'aka na-eji a potholder mgbe na-ejizi na-ekpo ọkụ na iko.
The iko casserole ike ga-eji ime ma ọ bụ reheat nri a ot oven ma ọ bụ na a ngwa ndakwa nri oven. Lee site iko n'akụkụ ekwe maka effortlessly peaking na ọganihu nke ihe oriri mgbe mmiri, na-enye kwukwara achịkwa ikpeazụ pụta.
Ndị a casseroles na-ji borosilicate iko-mma n'ihi na thermal mgbasa na ya mere obere ewekarị gbajaa mgbe ọ gụrụ okpomọkụ mgbanwe.
Biko Mata: Glass casserole kwesịghị iji n'okpuru a imi, na a stovetop, ma ọ bụ na-aba n'anya ma ọ bụ mkpọ okpomọkụ burners dị ka a kpọmkwem okpomọkụ isi iyi.
Integrated n'akụkụ ejiri ekwe maka n'enweghị eweli iko casserole na nke na oven na kichin iri-ụlọ table ma ọ bụ na-emekpa na azụ ọzọ. The adaba n'akụkụ ịṅụ aka hụ na a ala jide, ọbụna mgbe yi oké oven mitts.
Previous: Casserole na oval udi SKU NO.277-278-279-2710-2711
Next: Jasper Acha Borosilicate Glass SKU NO.2670
Casserole na gburugburu udi SKU NO.274D
Casserole na gburugburu udi SKU NO.273D
Casserole na oval udi SKU NO.2712
Casserole na gburugburu udi SKU NO.272D
Casserole na oval udi SKU NO.277-278-279-2710 ...
2019 Ambiente Frankfurt Booth okpomọkụ iguzogide ...
Borosilicate Glass Food akpa , Borosilicate Glass Bakeware , Borosilicate Glass Food Containers , Borosilicate Glass ite, Borosilicate Glass casserole , Double Walled Tea Glass,